Xaalad adag oo ka taagan degmada qafaalan ee Ceelwaaq | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xaalad adag oo ka taagan degmada qafaalan ee Ceelwaaq
Xaalad adag oo ka taagan degmada qafaalan ee Ceelwaaq
Korneyl Aadan Axmed Xirsi (Rufle) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo ayaa si kulul Ciidanka AMISOM ugu eedeeyay inay dhibaato ku hayaan shacabka ku dhaqan Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
“Gobolka Gedo wuxuu ku jiraa gacanta qaranka, marka laga reebo Degmada Ceelwaaq oo Ciidamada AMISOM ay go’doomiyeen, dhibaatana ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee degmadaasi ku nool.” Ayuu yiri Korneyl Aadan Rufle.
Isagoo la hadlayay Warbaahinta ayuu yiri “Degmada Ceelwaaq oo ay ku nool yihiin nus milyan qof, xuduudna la leh Ismaamulada Mandhera iyo Wajeer waxaa go’doomiyay Ciidamada AMISOM, oo garoonkeedii diyaaradaha xirtay, waxayna dadka deegaanka ku hayaan gabood-falo joogto ah, kuwaas oo u badan duqayn diyaaradeed iyo duqaynta madaafiida goobta, oo mar kasta ay waxyeelo ka soo gaarto dadka shacabka ah.”
Aadan Rufle oo soo dhaweeyay Guddiga Wasiirada ee Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay inay baaritaan ku soo sameeyeen toddobada qof ee Ciidanka AMISOM ku dileen deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa ugu baaqay in sidoo kale ay baaritaan ku sameeyaan waxa ka jira Ceelwaaq.
“Ra’iisal Wasaare Rooble wuxuu sheegay inay ka damqanayaan waxyeelada shacabka Soomaaliyeed, guddina waa uu u saaray dhacdadii Golweyn, waxaana guddigaasi leenahay soo dhawaada.” Ayuu yiri Aadan Rufle.
Waxaa kaloo uu yiri “Gabood-falada Ciidamada AMISOM ay gaysanayaan kuma koobna Golweyn, Guddigaa Golaha Wasiirada waxaan leenahay waxa la idin xilsaaray, wixii ka dhacay Golweyn yaanu noqoninee ee ha noqdeen badbaadada shacabka Soomaaliyeed.”
Korneyl Rufle ayaa yiri “Ceelwaaq kama jirto xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay iyo mid guudba, ma jiro gaadiid soo gala, dhinac walbo Degmada Ceelwaaq wax mari karo maleh, duqaynta diyaaradaha Kenya bay dadku ka baqayaan. Habeenkii Khamiista oo u dambeysay shan goobood oo Degmada Ceelwaaq hoos yimaada ayay diyaaradaha Kenyanku duqeeyeen, wardoonka iyo amarkana AMISOM baa iska leh.”
Rufle ayaa intaa ku daray “Waxaan leenahay haddii ay ku soo aaday marxaladda Golweyn, Golaha Wasiirada ee sharafta leh iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda hoos ha u fiiriyeen waxa ka jira Ceelwaaq.”
Previous articleBurcad caawa lagu soo bandhigay Degmada Heliwaa (SAWIRRO)
Next articleGolaha Wadatashiga Qaran oo soo saaray habraacyada doorashooyinka